bebob အဆိုပါစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များရဲ့အသေးဆုံးနှင့်အများစုမှာအပြီးအစီး 14.4V ပါဝါ Solutions Micro နဲ့ဘက်ထရီများအတွက်လျင်မြန်စွာ Chargers နှင့်ဘက်စုံ adapter ၏ Range ထည့်ပေးသည် - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » bebob Micro နဲ့ဘက်ထရီများအတွက်လျင်မြန်စွာ Chargers နှင့်ဘက်စုံ adapter ၏ Range ထည့်အဆိုပါစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များရဲ့အသေးဆုံးနှင့်အများစုမှာအပြီးအစီး 14.4V ပါဝါ Solutions
bebob Micro နဲ့ဘက်ထရီများအတွက်လျင်မြန်စွာ Chargers နှင့်ဘက်စုံ adapter ၏ Range ထည့်အဆိုပါစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များရဲ့အသေးဆုံးနှင့်အများစုမှာအပြီးအစီး 14.4V ပါဝါ Solutions
မြူးနစ်-based အာဏာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ bebob သည်မကြာသေးမီကမိတ်ဆက်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ကြမ်းတမ်း Vmicro (V-တောင်ပေါ်မှာ) နှင့် Amicro (သဟဇာတရွှေ-mount) 14.4V ဘက်ထရီအထုပ်အဘို့အားသွင်းနှင့်အာဏာ accessories များအပြည့်အဝမိသားစုကဆက်ပြောသည်သိရသည်။ အော်ပရေတာ-ကျင်းပ-The 45Wh, 98Wh နှင့် 150Wh lithium-ion ထုပ်, အတန်းအစားထဲမှာနိမ့်ဆုံးအလေးချိန်နှင့်ရှုထောင့်ကိုကမ်းလှမ်းပေမယ့်ယခုတော်အရွယ်အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်တစ်ခုခင်းကျင်း add သာအရွယ်အစားကိစ္စရပ်များအထူးသဖြင့်အခါနိယာမကိုလိုက်နာခြင်း ကို un-လိုက်ဖက်ဘက်စုံသုံးများအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်း။
နယူး bebob Micro နဲ့အားသွင်း A- (သဟဇာတရွှေ-mount) နှင့် V-mount ဗားရှင်း, ရည်ရွယ်ချက်-built ဈေးကွက်ထဲမှာအများဆုံးကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်အစွမ်းထက်အားသွင်းဖြေရှင်းချက်ဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်လုပ်နေကြသည်။ bebob နှစ်ဦးစလုံးတောင်ပေါ်များအတွက် Ultra-ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအားသွင်းဖြေရှင်းနည်းများနှင့် Adapter ကအတူလက်ရှိတွင် (ပါဝါကင်မရာများ, အလင်းအိမ်, အသံဂီယာနှင့်ပိုပြီးရန်) အိတ်ကပ်-size ကိုဘက်ထရီတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောအကွာအဝေးကိုဆက်ကပ်ဖို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တစ်ခုတည်းသောထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ AS2micro နှင့် VS2micro လက်ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသေးဆုံး 2-Channel ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းလျင်မြန်စွာ Chargers ဖြစ်ကြသည်။ 66 x ကို 92 x ကို 45mm.Together တိုင်းတာခြင်း, Amicro သို့မဟုတ် Vmicro ဘက်ထရီတစ် pair တစုံကို၎င်း, bebob S1micro AC အဒပ် / လျင်မြန်စွာအားသွင်းကိရိယာထိန်းညှိကစား့ 40 x ကို 138 x ကို 60mm တစ်ဦးအဆင်ပြေအပြိုင်ဒီဇိုင်း featuring, အ Powerbase: သူတို့ကနှစ်ခုကျစ်လစ်သိပ်သည်းအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်ဟု သူတို့သာ 16.8g / 2.5 အောင်စမှာ (လက်ရှိအားသွင်းရုပ်သံလိုင်းနှုန်း 2.5A, ဒါမှမဟုတ် 5.0A စုစုပေါင်း) 530V / 18.69A ၏လက်ရှိအားသွင်းပေးထားပါသည်။ 45 နာရီမှာနှစ်ခု 1.5Wh Micro max ကို 98 နာရီအတွင်းနှစ်ခု 2.5Wh Micro လက်လှမ်းမမီစွမ်းရည်ထဲကနှစ်ယောက် 150Wh Micro အပြည့်အဝ 3.5 နာရီအတွင်းအားသွင်း: အချိန်အားသွင်းဘက်ထရီအညီကွဲပြားခြားနားသည်။
တူညီတဲ့ footprint ကိုနှစ်ချက်စွမ်းရည်
4-ရုပ်သံလိုင်းတစ်ပြိုင်နက်အမြန်အားသွင်းဘို့, bebob အဆိုပါ AS4micro နှင့် VS4micro ပေးထားပါတယ်။ built-in အတူ AC အဒပ် 80W, DC နှင့် Powerbase function ကို, ထိုအားသွင်း 1.0kg / 2.2 ပေါင်အလေးချိန်။ အားသွင်းလက်ရှိ 16.8V / 1.25A (ချန်နယ်နှုန်း 1.25A, ဒါမှမဟုတ် 5.0A စုစုပေါင်း) ဖြစ်ပါသည်။ လေး 45Wh Micro အဘို့အချိန်အားသွင်း3နာရီ, 5Wh Micro အဘို့အ 98 နာရီ, နှင့် 7Wh Micro အဘို့အ 150 နာရီဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် 2-ရုပ်သံလိုင်းအားသွင်းကဲ့သို့တူညီသောအရွယ်အစား, အ bebob AS4micro နှင့် VS4micro ဘက်ထရီ၏နှစ်ကြိမ်ပမာဏကိုအားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ ကနယ်လှည့်နှင့်ရေကြောင်းပစ္စည်းကိရိယာများမှကြွလာသောအခါဤသည်ကိုချက်ချင်းဝက်တစ်ခုထူးခြားသောအကျိုးခံစားခွင့်များကလိုအပ်သောအာကာသလျော့နည်းစေသည်။
bebob V-တောင်မှာနှင့်ရွှေ-တောင်ပေါ်မှာသဟဇာတဘက်ထရီများအတွက် 8-Channel ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းလျင်မြန်စွာ Chargers ပူဇော်ဖို့ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်သူတဦးဖြစ်ခြင်းပင်နောက်ထပ်ဒီဇိုင်းအယူအဆမှာ "ဝက်-The-space ကို" ကြာပါတယ်။ အဆိုပါ VS8micro နှင့် AS8micro 8-ရုပ်သံလိုင်းအားသွင်း 100Wh အထိသာထရီခွင့်ပြုခဲ့တဲ့လေယာဉ်ပျံများကအထူးသဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဘို့, အများဆုံးအဆင်ပြေသည်။ လောလောဆယ်စျေးကွက်အတွင်းအမြန်ဆုံး 8-ရုပ်သံလိုင်းအားသွင်းဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကိုအပြည့်အဝစွမ်းရည်ရောက်ရှိဖို့ရှစ် 3Wh Micro ရှစ် 45Wh Micro များအတွက်ရှစ် 5Wh Micro နှင့် 98 နာရီ7နာရီကိုအားသွင်းဖို့ပဲ 150 နာရီကြာပါတယ်။
အဆိုပါနေရာလေးကို S1micro D-Tap လျင်မြန်စွာအားသွင်းကိရိယာဘက်ထရီအမျိုးမျိုးတို့ကိုတစ်ခု Ultra-ကျစ်လစ်သိပ်သည်း, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောနှင့်အလွန်အစာရှောင်ခြင်းတစ်ခုတည်းဘက်ထရီအားသွင်းသည်။ ဒါဟာ 365g / 12.8 အောင်စနှင့် D-Tap ကနေတဆင့် 168V, 5A မှာစွဲချက်အလေးချိန်။ တစ်ဦးက 45Wh ဘက်ထရီ 45 မိနစ် 98 အတွက် 1Wh နာရီ 15 မိနစ်စွမ်းရည်ရောက်ရှိနှင့် 150Wh 1 နာရီ 45 မိနစ်သွားကြဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။
အင်ဂျင်နီယာနှင့် handcrafted ဂျာမနီမှာ, Amicro နှင့် Vmicro လျင်မြန်စွာ Chargers ကြမ်းတမ်းပေါင်းစပ်အိမ်ရာ feature များနှင့်တစ်ဦး2နှစ်အာမခံကိုဆက်ကပ်။ စျေးနှုန်းများအောက်မှာသက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည် www.bebob.tv.
အများဆုံးဘက်စုံ A သုံးပြုနိုင်
Ultra-ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဘက်ထရီနှင့်အားသွင်းအပြင်, bebob အများဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘို့ Vmicro နှင့် Amicro ပါဝါပြား, ဘက်ထရီ Adapter က, breakout Adapter က, Hot လဲလှယ်ရေး adapter, Micro နဲ့ Beltclip နှင့်ထို့ထက် ပို. တွေရဲ့ array အပါအဝင်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများဟာ host ကိုဆက်ကပ်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယ်အရာကိုကင်မရာ, မော်နီတာ, အသံကိရိယာသို့မဟုတ်အလင်းရောင် - အ bebob Micro နဲ့အစုစုကိုအများဆုံးအဆင်ပြေလမ်းအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများအမျိုးမျိုးတို့ကိုပါဝါစေခြင်းဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ, အကျိုးရလဒ်များအမျိုးမျိုးကနေရွေးနိုင်သည်။
bebob Micro နဲ့ adapter ၏လက်ရှိအစုစုမှာတွေ့နိုင်ပါသည်:
bebob.de/en/a-mount/amicro/adaptoren.html(A-mount / ရွှေ-mMount သဟဇာတ)
20 နှစ်အတွင်းများအတွက်ဆန်းသစ်ပါဝါဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ကင်မရာဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်မသိ, bebob ရဲ့ဂျာမန်လုပ်ရညျအသှေးသစ်ကို Vmicro နှင့် Amicro Ultra-ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဘက်ထရီသို့တည်ဆောက်ထားသည်။ သောင်းချီ bebob ဘက်ထရီနှင့်အားသွင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏၏လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ရုပ်ရှင်နဲ့ TV ကိုစတူဒီယိုမှာအသုံးပြုမှုအတွက်လက်ရှိဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အစဉ်အမြဲအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီ - က bebob ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံထဲမှာဒါမှမဟုတ်မြူးနစ်ဧရိယာ၌ရှေးခယျြထားပေးသွင်းမှာဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အစုစုကို V-တောင်မှာနှင့်ရွှေ-တောင်ပေါ်မှာသဟဇာတဘက်ထရီ, Micro နဲ့ဘက်ထရီ, Chargers, adapter, Hot လဲလှယ်ရေး adapter နှင့်ထို့ထက် ပို. ပါဝင်သည်။ bebob ရဲ့ groundbreaking နည်းပညာဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ဟာကြမ်းတမ်းသေးအာကာသ-saving Vmicro နှင့် Amicro ဘက်ထရီကို၎င်း, Cube 1200, 1176Wh တစ်ဦးထူးကဲပါဝါစွမ်းရည်နဲ့ Multi-ဗို့အား Li-Ion ဘက်ထရီနှင့် built-in အားသွင်းပါဝင်သည်။ နှစ်တွေ bebob နေဆဲနီးပါးခိုငျမွဲဘက်ထရီ, အစားထိုးဆဲလ်တွေ, လှည့်ကွက် D-Tap နှင့် Cine V-တောင်မှာအပါအဝင်ယနေ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စံချိန်စံညွှန်းများသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း features တွေမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
Lewis ကဆက်သွယ်ရေးကပြင်ဆင်ပြန်ကြားရေး: [အီးမေးလျ protected]
Vikas Safrigina အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
Rhode Island အင်ဒီများအတွက် bebob Micro ချွတ်ဒန် Kneece အင်အားကြီးနိုင်ငံများ - သြဂုတ်လ 22, 2019
Motion Picture နှင့်အသံလွှင့်အဘို့ကင်မရာ, အလင်းအမှောင်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းပညာများအတွက် BrooklynBrooklyn ရဲ့တစ်ခုတည်းသောတစ်ခုမှာ-stop အရင်းအမြစ်အတွက် PRG ဖွင့်လှစ် VER ကင်မရာ့ Prep Facility - ဇူလိုင်လ 23, 2019
K-Tek မိတ်ဆက် KlassicPro Boom ရိုးစွန်းဒေသများမှ - ဇူလိုင်လ 9, 2019
ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ်	2019-06-03
ယခင်: Cine ဂီယာကုန်စည်ပြပွဲအမြော်အမြင်အောင်မြင်မှုကိုချီးမြှင့်လက်ခံမှ Claudio Miranda ASC
နောက်တစ်ခု: Blackmagic ဒီဇိုင်း DisplayPort 8K HDR ကိုနယူး Teranex Mini ကို SDI ကြေညာ